Yakanakisa Chikafu Cling Firimu Mugadziri uye Fekitori | Huanna
Iyi firimu yakagadzirwa nePLA, iyo isiri-chepfu kuvanhu uye nharaunda. Iyo inodzikisira zvachose mumvura uye kabhoni dhayokisa pasi pemamiriro anogadzikana mumwedzi mitanhatu, saka chinyorwa ichi chine hushamwari uye chinokubatsira iwe kuchengetedza nharaunda uye kuderedza kusvibiswa. Iyo ine kuomarara kwakanaka, yakasimba kutakura-kutakura, kuvhara chisimbiso, hapana leakage uye breakpoint mhando.
Zvinhu: Pla, Polylactic asidhi, PLA saizi: 30cm * 30m, 10mic / vanodzungunyika
Kuoma: Nyoro Nzvimbo yeKutanga: Shanghai, China
Kujeka: Transparent Ruvara: pachena
Zita Rekushandisa: NATUREPOLY Dhirivhari: 20-30days
Kufunga: 10mic Kushanda :: Chikafu Musika, Butchery, Supermarket, Kicheni, Restaurant,
Pasuru: 1 roll / bhokisi, makumi mana mabhokisi / katoni Rudzi rwebhizinesi: Mugadziri
Iyi firimu yakagadzirwa nePLA, iyo isiri-chepfu kuvanhu uye nharaunda. Iyo inodzikisira zvachose mumvura uye kabhoni dhayokisa pasi pemamiriro anogadzikana mumwedzi mitanhatu, saka chinyorwa ichi chine hushamwari uye chinokubatsira iwe kuchengetedza nharaunda uye kuderedza kusvibiswa. Iyo ine kuomarara kwakanaka, yakasimba kutakura-kutakura, kuiswa chisimbiso kwakasimba, hapana leakage uye breakpoint mhando. Zvakare zviri nyore kubvarura, zvine hutano uye zvisina kunhuwa, izvo zvinobatsira kune hutano hwevashandisi. Uine pachena kujekesa, uye zvakanaka kunamatira zvivakwa, iri sarudzo yakanaka yekumonera chikafu chitsva senyama, michero, miriwo nezvimwe, izvo zvinogona kuwedzera chikafu 'kutsva. Zvakare, isu tinoona kuti ichi chigadzirwa hachisi chepfu, saka haufanire kufunga nezve hutano hwechikafu. Iyi yekumhara yePLA hainyungudike muovheni yewa microwave, uye haidonhe nekuda kwekuwedzera kwemhepo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kunyorova uye kudziyawo chikafu. Nenzira iyi, kune akawanda maficha aunogona kushandisa ichi chigadzirwa senge hwezuva nezuva hupenyu uye mapikniki. Kana iwe uchida kuchengeta chikafu chako chiri chitsva, iyi PLA firimu ndiyo yako yakanyanya kunaka sarudzo.
Tichiomerera kuchisimboti che "mhando, mupi, mashandiro uye kukura", Tinogamuchira nemoyo wese vese vanobatana vekunze uye vekambani vanoshamwaridzana, uye tinotarisira kushanda pamwe newe munguva yepedyo-kusvika kune ramangwana rinotaridzika! Takatumira zvigadzirwa zvedu kune vese pasirese. Uyezve, zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nemhando yepamusoro michina yekuona mhando yepamusoro. Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu, ndapota usazeza kutibata nesu. Tichaedza nepatinogona napo kusangana zvaunoda.
Pashure: Imbwa Poop Bhegi
Biodegradable Cling Firimu
Tenga Cling Firimu
Cling Firimu Roll
Cling Firimu Kuputira
Kurongedza Cling Firimu
Pla Cling Firimu